साबधान ! यस्ता बानीले नास गर्छ पुरुषको वीर्य, आजैबाट सचेत बन्नुहाेस्, नत्र बिना सन्तान जिन्दगी काट्नुपर्ला - Saptakoshionline
साबधान ! यस्ता बानीले नास गर्छ पुरुषको वीर्य, आजैबाट सचेत बन्नुहाेस्, नत्र बिना सन्तान जिन्दगी काट्नुपर्ला
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २५, २०७४ समय: ६:५९:५१
गर्भ धारण गर्न नसक्नुमा समाजले महिलालाई नै दोष किन लगाउँछ ? यस्तो ठोस उत्तर छ यस्तो तपाईसँग ? के महिलाकै कमजोरीका कारण गर्भ नबसेको हो त ? हाम्रै नजिकका कतिपय महिलाले गर्भधारण गर्न नसकेको पाईन्छ ।
गर्भ नबस्नुमा दोष कस्को हो भन्ने त्यत्तिकै ठम्याउनै सकिदैन् । तर दोष महिलालाई नै लगाएको पाईन्छ । बाझोपन हुनुमा महिला र पुरुष दुबै जिम्मेवार हुने गरेका विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । बास्तबमा भन्ने उक्त शंका पुरुषमा गर्नु पर्ने अवस्था हुनु पर्ने हो । आधुनिक जिवन शैलीले पुरुषको वीर्यको मात्रा र गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । यो बिभिन्न समयमा पुष्टि हुँदै आईरहेको छ । अब गर्भ नबस्नुमा बढी दोष पुरुषमा जाने अवस्था छ । पुरुषले आफ्नो वीर्यलाई स्वस्थ राख्नु पर्नेमा ध्यान दिनु पर्ने बेला भएको छ । तल हामीले वीर्यलाई स्वस्थ्य राख्न त्याग्नु पर्ने केही बिषयहरु उल्लेख गरेका छौँ ।
धेरै पुरुषले पाइन्टको अगाडिको पकेटमा मोबाईल राख्ने गरेको पाईन्छ । तपाईले पनि अगाडिको खल्तीमा राख्ने गर्नु भएको छ कि ? तर यसले बीर्य निस्काशनमा असर गर्छ । मोवाईललाई जति पेल्बिसनजिक राखिन्छ स्वस्थ वीर्य उत्पादनमा हानी गर्ने त्यति नै प्रबल सम्भावना हुन्छ । तसर्थ पछाडिको गोजी वा झोलामा मात्र मोवाईल राख्ने गर्नुहोला ।
तनाबले शरीर मात्र नभई प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि निकै अशर गर्छ । बढि तनाब लिने मानिसको वीर्य असामान्य आकारको हुने अध्ययनले देखाएका छन् । असामान्य वीर्यको गुणस्तर पनि न्यून हुने गरेको अध्ययनको दावी छ ।
पुरुषले जति चाँडो धुमपान त्याग्छ, त्यति नै छिटो स्वस्थ वीर्य उत्पादनको सम्भावना बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बढी तौल भएका वा मोटा मानिसको वीर्यको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । मोटोपनले महिला यौन हर्मन एस्ट्रोजनलाई तीब्र पार्छ । अत्याधिक तौलले लिंग उत्तेजनामा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
तापमा अत्यधिक एक्सपोज भएमा पनि वीर्यको गुणस्तरमा असर गर्छ ।
– बिभिन्न अनलाइनहरू बाट